काङ्रेस, कोइराला डाइनाष्टी र चार स | सिमान्तMarginal काङ्रेस, कोइराला डाइनाष्टी र चार स – सिमान्तMarginal
Posted on 19 Dec 2014 19 Dec 2014 by Jesi | INCOMESCO
मुलुक नेत्रित्वको खडेरिमा फस्दैछ। नेत्रित्वकै कारण भारतले हालैका दिनमा प्राप्त गरेको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको जनबिश्वास हेर्दा नेपाल राजनेताको अभावमा दुखित छ, प्रताडित छ। नेत्रित्वमाथी हुने गरेका अलोचना, अपेक्षा र भरोसा यसै सन्दर्भमा सन्निहित छन, जुन अस्वाभाबिक होईन। जनता कुनै राजनीतिक दलहरुमा भरोसा गर्न लायक नेता नभएको गुनासो गर्छन्। भविष्य पनि यसरी नै बित्ला वा कोहि दोश्रो पुस्तामा पालो पर्खेर बसेका छन भनेर नेपाली कङ्रेस भित्रबाट हेर्ने कोसिस गरिएकोछ, बिषेशगरि कोइराला डाइनाष्टी भित्र।
दोश्रो पुस्ताको कांग्रेस नेत्रित्वकालागि कोइराला डाइनाष्टी भित्रबाट सुशील कोइराला पछि शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र सुजाता कोइराला अग्र पंक्तिका दावेदारहरू हुन । यिनिहरु मध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो प्रथम प्रतिनिधि बनाउन चाहिरहेका होलान ! कुन खुबी र बिषेताको आधारमा यी तीन जना प्रतिनिधि बन्लान ! वा ब्यक्ति मन परेको आधारमा छनौट हुने हुन, त्यो त भविष्यले नै देखाउला तर यहाँ एउटा खाका भने कोर्न सकिन्छ। कोइराला परिवार बाहिर भने यहाँ चर्चा गरिएको छैन ।
मोदी नेत्रित्वकै कारण भारतले हालैका दिनमा प्राप्त गरेको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको जनबिश्वास हेर्दा नेपाल राजनेताको अभावमा दुखित छ, प्रताडित छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला
यतिखेर संबिधानकै बारेमा चर्चा गर्ने समय हो तर ‘विवाद’ र ‘प्रतिष्ठा’को कारण झनै अनिस्चितता तर्फ धकेलिंदै गएको संबिधान भए पनि नहुने नभए पनि नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ। चिन्ताको बिषय भएकोछ। त्यसैले ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेको असल राजनेताले मात्रै बिवादित बिषयहरू मिलाएर मुलुक हाँक्न सक्ने क्षमता राख्छन। आज दु:ख पाएका नेपालीहरूले भोलिको नेत्रित्व खोज्नु स्वभविक हो। कांग्रेसको भविष्यलाई भावी नेत्रित्वको कसिमा राखेर हेर्ने बेला भईसकेकोछ।
जतिवेला कृष्ण प्रसाद भट्टराइ र गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीच तिब्र बिवाद चलिरहेको थियो, त्यतिबेला गिरिजाको उत्तराधिकारी को होला भनेर साथिहरू बिचमा अनायास चलेको छलफलमा मैले सुशील कोइराला भनेर फ्याट्ट भनिदिँदा झन्डै मैले कुटाइखाएको थिएँ। किनभने त्यतिबेला चर्चा हुन्थ्यो कि त आर एस एस (राम चन्द्र, सैलजा र शेर बहादुर) कि त भने के जी बी (खुम बहादुर, गोबिन्दराज र बिजय गच्छदार)। सुशील कोइरालाको कसैले नामै लिँदैनथ्यो । यहाँसम्म आइपुग्दाखेरीको वस्तबिकता सबैका सामु छर्लंग छ, चर्चा गर्ने मेरो मस्कत पनि होईन ।
झनै अनिस्चितता तर्फ धकेलिंदै गएकोले संबिधान भए पनि नहुने, नभए पनि नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ।
नेत्रित्वको होड राम्रो कुरा हो। प्रधानमन्त्री बनेर ‘भित्तामा फोटो टाँस्ने प्रतियोगितामा सहभागी’ हुनु भन्दा पनि राजनेता हुन सक्ने शिप, क्षमता र कला कोसँग छ भनेर हेरिनुनै छनौट प्रक्रियाको सामान्य चलन हो। सामान्यतया परिआए साम, दाम, दण्ड, भेद जे पनि गर्न सक्नेलाई सास्त्रिय शैलीको कठोर नेता मानिन्छ तर आधुनिक नेता ‘धेरै सुन्ने, काम सिध्द गर्ने, आफ्नो योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसक्ने र थोरै बोल्ने, देश काल परिस्थिती बुझेको सदाचारी मानिस नै नेता हो। नेपालका नेताहरू काममा भन्दा बेशी प्रचारमा विश्वाश राख्छन।
भनिन्छ- राजनीति र आर्थशास्त्र एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन, तर आजको राजनीति त ”कागको फुल कोइलीले चोर्ने पेशा” भएकोछ। त्यसमा धेरै झुटको पुट लगाउने गरिन्छ, जुन गलत हो।
वी पी कोइराला महान नेता भएकोमा विवाद छैन। ती गुणहरू उनका कान्छा छोरा सशांक कोइरालामा जनताले खोजिरहेका छन भने के सशांकमा त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने क्षमता होला !
फेरि फर्कौँ नेपाली कांग्रेसका यिनै तीन जना तर्फ। पूर्व पेशाले चिकित्सक शेखर कोइराला नोना आमाका छोरा हुन। नोना कोइराला गिरिजा कोइरालासँग नजिक थिइन। पूर्व पेशाले अर्का चिकित्सक शशांक कोइराला बी पी कोइरालाका सहोदर कान्छा छोरा हुन। त्यसैगरी बैवाहिक सम्बन्धका कारण लामो समय जर्मन बसेकी सुजाता कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन। वास्तवमा कोइराला परिवारका यी तीनै जना उत्तराधिकारी हुन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत आफुतर्फ आकर्शित गर्न खोज्दैछन । दुवैजना चिकित्सक शेखर र सशांक राजनीतिमा आएपछि कुनै लाभको पद लिएका छैनन। चिकित्सक पेशा मुलत समाज र जनताको सेवासँग अभीन्न रहेकोले यिनिहरु यस क्षेत्रमा अब्बल मानिन सक्छन। जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता र वाक चतुर्याइँ पनि यिनिहरुले प्रदर्शित गर्दै आएका छन। शेखर कोइरालासँग त मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट र कुराकानी भएको छ। मैले यी तिनै जनाको बीचार र क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको छू। समय र गतिविधिमा निर्वाह गरेको भूमिकाले उनिहरूको स्तर निर्धारण गरिरहेकोछ। त्यतिखेरका एमाले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र त्यसै मन्त्री परिषदकी उपप्रधान मन्त्री सुजाता कोइरालालाई ‘जनताको मतमा पराजित भएर पनि सत्ता मोह देखाउने’ नैतीक प्रश्नले छाडने छैन। ‘देश नियममा चलेको हुन्छ’ भन्ने मान्यता नै उक्त नैतीक प्रश्नको धरातल हो ! तर पनि महिला प्रतिनिधि हुन पाउनु उनको शसक्त पक्ष हुन सक्छ।
Posted in नेपाल, नेपाली कङ्रेस, बी पी कोइरालाTagged नेपाल, नेपाली कङ्रेस, बी पी कोइरालाLeaveacomment
Previous Postमेरा बारेमा मात्र देवतालाई किन फिकिर हुने ?Next Postछोराको सन्देश